Insaan - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Biniaadan)
Insaanka ama Biniaadan(Homo Sapiens iyo Homo Sapiens Sapiens) Waa xayawaan ka tirsan reer Daayeer.Biniaadanka wa xayawaan ajaayib maskax weyn leh oo caqli badan.Biniaadanka wa Xayawaanka kaliya oo meelkasta aduunka ku nool iyo wa xayawaanka kaliya oo aqaan sidaa cunto ku kariso dab iyo lebbisto. Dadka oo shaqo ka digtan inay sida binaadanta u dagmatoo waxaa la yidhahda Anthrobologists.
1 waxyaabaha oo bini aadanka ka koobanyahay
2 waxyaabaha ee biniaadanka iyo bahalada ee ku kala duwanyihiin
waxyaabaha oo bini aadanka ka koobanyahayEdit
Qofka biniaadanka waxoo leeyahay Jir lagu qiyaasaayo 1,8m², 90,000 oo kilomitar oo xidid ah, 206 Lafo ah, 600 oo murqo ah, 13 biliyan oo dareemayaal ah, 4 ilaa 6 litar oo dhiig ah oo wadnaha jirka kushubo,Maskax 1.350garaam ah iyo timaha oo gaaraayo ilaa 5 miliyan.
waxyaabaha ee biniaadanka iyo bahalada ee ku kala duwanyihiinEdit
Bahalada sida shimbiraha iyo quraanshada, waxee leeyihiin baalal ee ku haadaan, waxyaabahaas biniaadanka malahan, laakiin hadii cunug biniaadan ah, oo hadda dhashtay looga tago meel jasiirad ah, oo qof joogin. cunugaas maka duwanaan karo xayawaanka, sababtoo ah, luqad malahan oo ku hadlo ama aadaab oo wax ku garto.
Biniaadanka waxaa dhaqan u ah meesha oo ku dhashtay ama qoomiyada oo ka dhashtay.
Biniaadanka waxa oo uuga duwanyahay xayawaanka waxaa ka mid ah, ogaashaha in oo ilaaheey jiro. 100% Soomaalida waxee rumeesanyihiin in oo ilaaheey jiro, ayaga oo raacsan diinta Islaamka.
biniaadanka waa dad baran karo hadalka ama luqadaha, shimbiraha qaar neh wee baran karaan hadalka ayaga oo isticmaalaayo hal hal xaraf ee ku celceliyaan inkastoo ladhihi karin taas luqad.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Insaan&oldid=192182"
Last edited on 1 Juun 2019, at 05:53
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Juun 2019, marka ee eheed 05:53.